Archive du 20161209
Kajikajin�ny mpanjanaka Kandida 3 hahintsana amin�ny 2018 ?
Antomotra ny 2018 hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika. Misy ireo efa nanambara ny firotsahany ary ao ihany koa no efa miomana fatratra na tsy mbola naneho ampahibemaso aza. Misy koa anefa ireo miketrika mangina.
Kaominin�i Tsaraeso Tsy fantatra intsony ny tena ben�ny tan�na
Misavoritaka ambony ambany amin�izao fotoana izao ny zava-misy ao amin�ny kaominina ambanivohitra Tsaraeso, distrikan�i Betroka
Lehiben�ny Faritra Alaotra Mangoro Hapetraka ofisialy amin�ny alatsinainy izao
Hotanterahina amin�ny alatsinainy 12 desambra ho avy izao ny lanonana hametrahana amin�ny toerany ny lehiben�ny faritra Alaotra Mangoro vaovao, Ranarisoa Desir�.
Tsaboy aloha ny tenanareo !
Salama tsara ve ry Jean sa mbola lanadanaky ny dia tany Parisy a ? Efa elaela ihany isika tsy niresaka momba ireo afera maromaro tsy nisy tohiny ka dia mba hangata-baovao indray na dia efa zatra mahazo ilay valy boraingina matetika hoe � efa mandeha ny fanadihadiana � aza e !
Misaona ny tontolon�ny sarimihetsika Nodimandry Randrenja
Nodimandry omaly alakamisy 8 desambra hariva ilay kintan�ny sarimihetsika Malagasy Gerard Razafindrakoto, fantatry ny rehetra tamin�ny anarana Randrenja, tao amin�ilay sarimihetsika mitohy � malok�ila�.
Sakafo lany daty miparitaka etsy sy eroa Manaitra ny rehetra ny mpiaro ny zon�ny mpanjifa
Manomboka miparitaka eny an-tsena sahady amin�izao ankatoky ny fetin�ny krismasy sy ny faran�ny taona izao ireo karazan�entana lany daty, hoy Rabetsara Lita filohan�ny fikambanana mpiaro ny zon�ny mpanjifa ( RNDC).